Tang Jun Automobile Seven Two Workers Congress Inoitwa Zvinobudirira - China Shandong Honglu
Mine kuvakwa michini
Diesel senga motokari
kuchera kudhonzwa vanhu motokari
kuchera murayiro motokari
kuchera vhiri loader
New simba senga motokari
Other inokosha chinangwa motokari
mafuta tangi rori
Tang Jun Automobile Seven Two Workers Congress Inoitwa Zvinobudirira
Muna January 3rd, zuva waipenya uye ushamwari sezvo chitubu. The nomwe chechikamu rechipiri mudonzvo guruundano wechaunga yakaitwa musangano mukamuri chivako nomwe, sachigaro Xue Xingzhen, maneja mukuru Zhang Yanhong, Mutevedzeri vakawanda maneja Wu Dengxi, Si Tao, Gao Yongguang, sachigaro nekambani kutengeserana Union uye mutevedzeri maneja Zhang Jialin. Zhang Jialin, mutevedzeri wapurezidhendi uye maneja mukuru wekambani, sachigaro pamusangano. 63 mudonzvo Vamiririri uye 42 iyoyo vamiririri vakapinda musangano. Vapindi vakaungana kukurukura kukosha zviitiko, unoratidza chikuru Blueprint mudzimu Tang Jun kuti achipayona uye enterprising.
Nenguva 8:00 mangwanani, musangano akatanga kwazvo muna zvikuru rwiyo Tang Jun. The vaivapo vakateerera uye vaiona "mashoko pamusoro kwegadziriro chekambani nzwisisika urongwa muna 2018 kuti" nokuda mutevedzeri maneja mukuru wekambani, Wu Jianke , Minister dzevanhu zviwanikwa utariri, "riri amboshandurirwa kuita kuongororwa nzira muna 2018" uye "mashoko pamusoro urongwa wezvemari kambani muna 2018" by Li Xianguo, gurukota rezvemari. Work mushumo.
Pamusangano, sachigaro kambani, Xue Xingzhen, zvinganaka mutemo boka 2018, "kuzvida rokuongorora uye dzekuno rokuongorora uye Implementation, mitezo yose kunzwisisa mhou, kuderedza zvinodyiwa uye kubata kota, kusunda mambure itsva anofarirwa musika ", nekutatamura chekambani zvinangwa mutemo zvizere. Muna 2018, akataura kuti chinangwa nekambani Mutemo 2018 kwaiva kuvandudza mishonga sezvo mukuru mutsetse, aite yakawiriranwa rokuongorora gadziriro kuzvida rokuongorora, kuti abate dzakaonda kugadzira, aite kunyatsoshanda pakati yorukosoro rutapudzo, kungoramba kusuma zvigadzirwa zvitsva kumusika, kutungamirira iri hafu danho ukabata musika.
Muna 2018, kumanikidzwa mumusika upfumi achiri hombe uye mumusika makwikwi zvikuru kwazvo. Xue nguva anodana ose vamiririri kuti zvinoshingaira vomurova uye kutungamirira mudonzvo kunyatsokurudzira nzwisisika, aite mutemo wekambani nani, kushanda nesimba uye creatively kupa zvizere kutamba kune matarenda uye matarenda zvose tsvimbo uye vashandi, kuti zvakazara yeuka mutemo pakati 2018 kambani. Mark.
Post nguva: Apr-21-2018
No.1 meishan mugwagwa, zichuan zvoupfumi, zibo Shandong China